Coronavirus: Kenya iyo Tanzania oo ka heshiiyay xurguftii dhex martay
Wednesday September 16, 2020 - 10:13:37 in News by Xaaji Faysal
Dowladda Kenya ayaa in muddo ah ka walaacsaneyd in Tanzania aysan daacad ka ahayn
Dowladda Kenya ayaa dalka ay deriska yihiin ee Tanzania ku dartay liiska dalalka laga dhaafay inay muwaadiniintooda is karantiilaan marka ay ka soo degaan dalka.
Tallaabadan ayaa loo arkaa mid lagu muransan yahay maaddaama Tanzania aysan muddo bilooyin ah shaacin kiisas cusub oo Covid-19 ah.
Labadan dal ee Bariga Afrika ku yaalla ayaa waxaa ka dhaxeeyay xurguf diblomaasiyadeed tan iyo bishii May markaas oo ay Kenya ka mamnuucday darawallada gawaarida xamuulka ee Tanzania inay soo galaan dalkeeda.
Dowladda Kenya ayaa in muddo ah ka walaacsaneyd in Tanzania aysan daacad ka ahayn sida ay ula tacaashay xanuunka safmarka ah. Bishii June, Madaxweyne Magufuli ayaa ku dhawaaqay in Tanzania "ay xor ka tahay coronavirus" isagoo sheegay inay taas mahaddeeda leedahay ducooyinka dadweynaha dalkaas.
Balse waxay u muuqataa in xiisadda labada dal ka dhaxaysay ay haatan qaboobeyso.
Dalalka kale ee ay Kenya ka saartay liiska is karantiilka qasabka ah waxaa ka mid a Koofur Afrika, Mareykanka, Hindiya, Mexico iyo Spain – oo ka mid ah dalalka laga soo sheegayo kiisaska ugu badan ee Covid-19.
Dowladda Kenya ayaase ka dooneysa dhammaan dadka dalka imaanaya inay sitaan shahaado caafimaad oo muujineysa inay ka badqabaan Covid-19. Rakaabka uu heerkulkoodu ka sarreeyo 37.5 ayaa la karantiili doonaa.
Kenya waxaa ilaa iyo haatan laga soo sheegay 36,000 oo kiisaska Covid-19 ah iyo 600 oo dhimasho ah.